Akeekachisi ministirri mummee hangam hojiirra ola laata? - BBC News Afaan Oromoo
Akeekachisi ministirri mummee hangam hojiirra ola laata?
Ministirri Mummee Dr Abiy Ahimad torban darbe keessa qondaaltoota mootummaa olaanoo maallaqa baankiiwwan biyyoota alaa keessa olkaawwantan irratti qorannoon gaggeefamaa jiraachu eeruun akeekachiisaniiru. Bu'aan qorannichaas adeemsaan ifa akka ta'u ibsaniiru.
Kan dura qabeenyaa qondaaltootaa ilaalchisee galmeessuuf tarkaanffiin eegalamu illeen maaliirra gahuun akka dhaabate baayyeen ni gaafatu.
Kanaafuu akeekachiis ministira mummee Dr Abiyi kan ammaa kunis hangam bu'uura qabaataa laata jechuun gaaffii kaaseera.
Haala akkanaatiin attamiin qondaaltoota seeratti dhiyeessuun danda'amaa laata? jechuunis itti gaafatamaa Waajjira Abbookaatoo seeraa addaa duraan qondaaltoota dargii himachuuf hundeefamee, booda keessa ammoo itti gaafatamoo kutaa seeraa Abbaa taayitaa Gumurukii Itoophiyaa duraanii kan turan Obbo Yohaanis Walda Gabreeliin dubbifneera.
Oggeessi kunis wayita ammaatti Daarektara Dhaabbata seeraa jaarsummaa Waldaalee daldalaafi damee Finfinnee keessa hojataa jirau.
Galmeen qabeenyaa qondaaltootaa eessa gahee?
Akka obbo Yohaanis jedhaniitti, ''qondaaltoonni qabeenyaa ofiifi maqaa maatii isaanitiin galmaa'ee jiru galmeeessisuu isaanii nan beeka. Ragaas qaba. Hedduun isaanis kan kan raawwtan jaalatanii osoo hintaanee dirqisiifamani ture. Erga galameen sun gaggeefamee boodas ministirri mummichaa duraanii Obbo Mallas ragaa sana qabachuun akka ittiin qondaaltoota sodaachisaa turan beeka. Karaa gara biraatiin ammoo warra barbaadan akka himatan garuu wayita ammaa kanatti sadarkaa komishinariifi ministiraatti kan argaman jiru,'' jedhaniiru.
Galmeen gaggeefame hangam sirrii ture?
Qondaaltoonni qabeenyaan galmeessaniifi kan irratti argame waan adda addaa ta'ee argameef himannaan irratti banamee turees jiru. Kan himataman ammoo wayita waldiidaan siyaasaa umamee qofatti ture. Ragaaleen galamee qabeenyaa qondaaltoota mootummaa ilaalatuus ummataaf ifa ta'u kan qabaatu ta'ulleen, sababii hinbeekamneen kun osoo hinta'iin hafeera. Qabeenyaa hanga miiliyoona dhibba afuriifi shanii baasuu galmeessanii kun attamiin argamee jedhamanii yoo gaafataman, motummaa ykn komishiinii kanaafi sanaan nuuf kanfalameeti kanneen jedhan akka jiran nan beeka. Himannaawwan haala kanaan jiran jiru.
Akeekachisi Dr Abiyi kan ammaa hangam qabatamaadhaa?
Akka naaf galutti waan miseensaafi namoota Ejansii Nageenyaafi odeeffannoo biyyattii hundeessan keessa tureefu, akeekachiisi isaa baayyee qabatamaa natti fakaata. Haala waliigaltee farra seeraan ala maallaqa dadabarsuutiinis, namni tokko yoo baankii biyya biraa maallaqa kaawwatufi dhimmoonni shakkisiisoon yoo jiraatan, biyyoonni dhimmi isaan ilaalatu ragaa wal jijiruuf sirni jira. Haasaa minisira mummees kallattii kanaanan hubadhee. Kunis haasawa isaa caalaa kan qabantamaa taasisuu natti fakkaata.
Akeekachisi kun hojiirra olfamaa laata?
Akeekachiisa hojiirra olchuufi tarkaanfii fudhachuuf kan barbaachisu murteefi fedhii motummaa qofaadha. Innis jira jedheen amana. Soodaan kiyya inni guddaaan itti gaafatamummaan kun dhaabbata kamiif kennama kan jedhuudha. Dhaabbanni duraan farra malaamaltummaa jedhamuun beekamu kan dandeetti hinqabne waan ta'usaatiin alattis ofumaanuu malaamaltummaa keessatti kufuunsaa ni beekama.
Isaan boodas itti gaafatamummaan Ministira haqaafi Polisii Federaalaatiif kenname. Polisiin federaalaa osuma ragaan maallaqa biyya alaatti olkaa'amee kennameefuyyu dandeetti ittiin kana raawwachisu qaba jedhe hinamanu. Akkasumas Ministirri Haqaa duraaniitis dhimma kana raawwachisuuf dandeetti kan qabu natti hinfakkaatu. Tarii mudama haaraa amma taasifamuun jijjiramni kan hindhufne yoo ta'ee, hanga maa kan jiraniin badaa abdiin natti hinmul'atu.
Walumaagalattis, tarkaanfii ministira mummichaa yoo dinqisiifadhe iyyuu, dandeettiin dhaabbilee itti gaafatamummaa kana fudhachu qabanii gadaanaa ta'uunsaa dhimmicha gaddisiisaa taasisa.